Guidelines for Pedestrians - traffic.nepalpolice.gov.np
ताजा समाचार ट्राफिक गतिविधि मेट्रो ट्राफिक एफ.एम. प्रोग्राम
• सधै जेब्राक्रसिङ्गबाट मात्र बाटो क्रस गरौं ।
• हरियो बत्ति बले पछि मात्र बाटो क्रस गरौं ।
• रातो बत्तिमा बाटो नकाटौं ।
• नजिकै आएको सवारी साधन क्रस भए पछि मात्र बाटो काटौं ।
• मोडहरुमा बाटो नकाटौ ।
• रोकि राखेको ठुलो सवारीको अगाडी पछाडीबाट बाटो नकाटौ ।
• हतार गरेर बाटो नकाटौं ।
• रातको समयमा चम्किलो लुगा लगाएर मात्र बाटो क्रस गरौं ।
• फुटपाथ भएको सड्कमा सधै फुटपाथबाट हिडने बानी बसालौ ।
• बच्चाहरुले आफु भन्दा ठुला मानिस संग सड्कमा हिडदा भित्ता पटि्ट हात समातेर हिडने बानी बसालौं ।
• आफु तर्फआई रहेको् गाडीको हर्कत बुझौं ।
• सवारी आवागमनमा बाधा अवरोध पुग्ने गरि कहिल्यै नहिडौं ।
We must follow the six-step crossing code whenever we have to cross the road:
4 . WAIT
6. KEEP LOOKING and LISTENING
Emergency vehicles :If an ambulance, fire engine, police or other emergency vehicle approaches using flashing blue lights, headlights and/or sirens, keep off the road.
साइट सूची पृष्ठ भ्रमण: ३७६३७ ईमेल हेर्नुहोस् नियम र सर्त गोपनीयता नीति प्रतिक्रिया / जिज्ञासा